Qalabka anshaxa: maxay yihiin, sifooyin iyo faa'iido | Cusbooneysiinta Cagaaran
Maanta waxaan ka hadlaynaa walxaha tabinta iyo astaamahooda. Waxay ku saabsan tahay maaddooyinka iyagu iska caabin yar oo wareega wareegga korantada sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee loo abuuray. Waxay leeyihiin qaab dhismeedka atomiga ah oo ka dhiga iyaga hagayaal koronto oo wanaagsan tan iyo markii ay sahlayso dhaqdhaqaaqa elektaroonigga dhexdooda. Nooca noocan ahi wuxuu door bidaa gudbinta korantada oo aadamuhu wuxuu ku talaabsaday horumar badan mahadiisna waxaa u leh agabkan.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan habdhaqanka iyo astaamahooda.
2 Qalabka anshaxa
2.1 Anshax wanaag
2.2 Qaab dhismeedka atomiga
2.3 Nuclei midaysan
3 Astaamaha jirka ee walxaha wax lagu kala qaado
4 Noocyada qalabka wax lagu kala qaado
Qalabkan isdabajoogga ah waxaa lagu soo bandhigi karaa qaabab kala duwan iyadoo kuxiran xaaladaha gaarka ah ee lagu sameeyay. Tusaale ahaan, waxaan helnaa biro bir ah oo aan laga dhigin inay ka mid noqdaan wareegyada korantada. In kasta oo ayan ka mid ahayn shirarka korantada, haddana waxyaabo badan ayaa leh aalado koronto lagu qabto. Noocyadan Qalabka korantada lagu gudbiyo waxay u horseedi karaan khataraha qaarkood iyo shilalka qaarkood ee guriga ka dhaca.
Waxa kale oo jira qalab unipolar ama multipolar koronto tabinta. Waxaa si rasmi ah loogu adeegsadaa inay saxaan walxaha wareegga korantada. Qalabkan waxaa loo isticmaalaa labadaba qaybta warshadaha iyo berrinka ama degaanka. Badanaa waxaa lagu sameeyaa gudaha fiilooyinka naxaasta ah iyo noocyada kale ee maaddooyinka macdanta ah. Tani waa waxa mas'uul ka ah sameynta korantada. Si ay isaga ilaaliso khataraha suurtagalka ah, waxaa lagu daboolay waxyaabo dahaaran. Intaa waxaa dheer, iyada oo kuxiran qaabeynta wareegga korantada, qaboojiyeyaasha kala duwan ayaa lagu kala saari karaa taas leedahay dalab warshadeed ama qaybinta korantada. Deganaanshuhu badanaa waa kuwo jilicsan oo kuwa loo isticmaalo qaybinta korantada ayaa ka sii dhumuc weyn. Waxay sidoo kale kuxirantahay inta koronto ee ay tahay inay qabato.
Waxaan mid mid u tilmaameynaa waxa ka kooban iyo astaamaha agab wax lagu kala qaado. Qalabka wax lagu socodsiiyo waxaa badanaa lagu gartaa iyada oo aan la siinin caabbinta marinka korantada ee dhex marta iyaga. Marinkan korantada ayaa suurtagal u ah mahadnaqa guryaha iyo korantada. Astaamaha sameeya qalabka wax lagu kala qaado waa kuwa dammaanad qaadaya wareegga korantada. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu gaaraa iyada oo aan wax laga beddelin ama la burburin maaddada la sheegayo. Aan aragno waa maxay astaamaha suurtageliya qabashada korontada:
Qalabku inuu noqdo kaariye wanaagsan waa inuu lahaadaa ku shaqeynta koronto wanaagsan. Sannadkii 1913-kii ayaa la aasaasay in naxaasta loo isticmaalay inay noqoto tixraac ku saabsan tabinta korantada. Naxaas xaaladdiisa saafiga ahi waa ta u adeegta tixraac si loo cabbiro loona isbarbardhigo isuduwaha agabyada kale.
Sidan oo kale, tixraaca waxaa lagu qaadan doonaa qabatinka silig naxaas ah oo mitir ah oo dherer ah iyo garaam tiro ah oo 20 heerkul ah ah. Qiimuhu wuxuu u dhigmaa 5,80 x 107 Sm-1. Qiimahaan waxaa looyaqaanaa 100% tabinta korantada ee 'IACS', waana halbeeg lagu cabirayo isuduwaha maaddooyinka la isticmaalo. Qiimayaashan, walxaha wax lagu dhaqo ayaa loo tixgeliyaa sida oo kale haddii ay ka badan tahay 40% IACS. Waxyaabaha ay leeyihiin kala-bax ka badan 100% IACS waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin qalab wax-qabad sareeya.
Qaab dhismeedka atomiga
Qalabka loo tixgelinayo kaaliyeyaasha, waa inay lahaadaan qaab atom ah oo u oggolaanaya korantada inay dhex marto. Atamka waxaa kujira wax yar oo elektaroonik ah oo ku jira qolofkooda waxtar leh. Waxaan ognahay in atomku leeyahay elektaroonik ka go'ay bu'da. Taas macnaheedu waxa weeye in aysan qaadanayn qadar badan oo tamar ah oo elektaroonik ah oo ka wareegaya hal atom oo kale. Haddii tiro badan oo tamar ah loo baahan yahay, looma tixgelin karo inay tahay wax tabinta.
Qaab dhismeedka mooleelka ee walxaha wax lagu kala qaado waa in lagu sameeyaa shabakad nuclei ah oo isku xiran. Midowgan ayaa ficil ahaan aan dhaqaaqin sababo la xiriira isku xirnaanshaha ka dhexeeya. Waad ku mahadsantahay xaalada nuclei mideysan, xaalada waxaa loo diyaariyey si elektaroonikyadu ay si xor ah u dhaqaaqi karaan ugana fal celin karaan dhawaanshaha aagga korantada.
Astaamaha jirka ee walxaha wax lagu kala qaado
Aan aragno maxay yihiin astaamaha jireed ee walxaha wax lagu kala qaado:
Malleable: Kuwani waa qalab leh heer sare oo malleability. Tani waxay ka dhigan tahay inay awoodaan inay sameystaan ​​iyagoon jabin. Qalabka anshaxa ee inta badan loo adeegsado codsiyada gudaha ama warshadaha waa in la foorarsadaa oo la fooraraa si loo waafajiyaa si sax ah. Sidaa darteed, malleability waa dabeecad muhiim u ah qalabkan.
Adkaysi u leh: qalabkani waa inuu leeyahay iska caabin sare oo la xidho. Waa inaan maanka ku haynaa inay la kulmi doonaan xaalado sare oo walaac farsamo iyo heerkul sarre leh. Waana in qaar badan oo ka mid ah wareegga wareegga korantada ay sare u qaadaan heerkulka.
Lakabka dahaarka: Markii loo adeegsanayo dalab degenaansho ama warshadeed, waxay u baahan yihiin in lagu daboolo lakabka dahaadhka si looga fogaado khataraha. Lakabka kore waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca jaakada dahaarka leh waana lagama maarmaan in laga hortago in korantada soo socota ay nala soo xiriirto. Khatarro badan iyo shilal badan oo ku jira walxaha wax lagu kala iibsado ayaa u sabab ah fashilka lakabkan dahaadhay.
Noocyada qalabka wax lagu kala qaado
Aan aragno maxay yihiin noocyada ugu muhiimsan ee walxaha wax lagu kala qaado ee jira:
Kalkaaliyeyaasha biraha: Iyagu waa kuwa ay ku samaysan yihiin biro adag iyo iskumidyada ay ka kooban yihiin. Waxay leeyihiin hanaan sare oo laga sameeyay elektaroonigga oo ku jira wareegga ugu dambeeya ee atamka iyaga oo aan maalgalin tamar badan. Tan macnaheedu waxa weeye in elektirooniggu ka gudbi karo hal atom oo kale una guuri kara tamar yar oo lumisa. Alloysyada ugu badan ee loo adeegsado rakibidda korantada ayaa ah naxaas, naxaas iyo dahaadh zinc; tinplate, daawaha birta iyo daasadda; Nadiifinta naxaasta naxaasta ah; iyo aaladaha nikkel ee chromium.
Qalabka korantada: Kuwani waa xalka qaar ka kooban ion bilaash ah.
Gawaarida gaaska: waa kuwa lagu soo rogay hawsha ionization. Thanks to nidaamkan, wareegga korantada ayaa lagu gaari karaa iyaga. Hawada waxay noqon kartaa kaariye koronto, sida xilliga hillaaca inta lagu jiro duufaanka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabo badan oo ku saabsan qalabka wax lagu xaliyo iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Qalabka anshaxa